एकीकृत ग्रामिण विकास गुल्मीको अध्यक्षमा श्रीपाली सर्वसम्मत, डा. पच्या सहित ४ जना सम्मानित - Gulminews
एकीकृत ग्रामिण विकास गुल्मीको अध्यक्षमा श्रीपाली सर्वसम्मत, डा. पच्या सहित ४ जना सम्मानित
२०७८ आश्विन २४, २१:०९
गुल्मी, २२ असौज । एकीकृत ग्रामिण विकास समाज गुल्मीको १२ औँ अधिवेशन एवम् २७ औ साधारण सभा सम्पन्न भएको छ । शुक्रबार तम्घासमा सम्पन्न अधिवेशनले गणेश श्रीपालीको अध्यक्षतामा नौ सदस्यिय नयाँ कार्यसमितिको चयन गरेको छ । जसको उपाध्यक्षमा भगवती श्रीस, सचिवमा शंकर नेपाली, सह–सचिवमा कमला विक, कोषाध्यक्षमा तुल्सिराम काउछा लगायत अन्य सदस्यहरु रहेका छन् ।
सभाकै अवसरमा संस्थाले विभिन्न क्षेत्रमा रहेर समाजमा योगदान गर्ने विभिन्न व्यक्तिहरुलाई सम्मान गरेको थियो । जसअन्तरगत लामो समयदेखि सामाजिक अभियानमा सक्रिय विष्णु प्रसाद भण्डारी, स्वास्थ्य क्षेत्रमा उत्कृष्ट योगदान पु¥याएबापत गुल्मी अस्पतालका प्रमुख डाक्टर उत्तम पच्या, प्रशासन विज्ञको रुपमा रेसुङ्गा नगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत भक्तिराम मरासिनी, उत्कृष्ट कर्मचारीको रुपमा बसन्त श्रेष्ठ, कमल सुनार र माधव भट्राई लाई सम्मान गरिएको छ ।
त्यसैगरि जिल्लामै पहिलो पटक पूर्ण संस्थागत गाउँपालिका घोषणा गर्ने मालिका गाउँपालिकालाई पनि संस्थाले सम्मान गरेको छ । कार्यक्रममा बोल्दै प्रमुख अतिथि लुम्बिनी प्रदेशका विशेषाधिकार समति सभापति कमलराज श्रेष्टले राजनीतिक दलहरु आपसी झगडा नभर्ई विकासमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताए । भगवानले नेपालीलाई अरु सबैथोक दिएपनि बुद्धि नदिएर आफुहरु पछाडी परेको उनको भनाई छ । साथै एकीकृत ग्रामिण विकास समाजले गरेको काम उत्कृष्ट रहेकोले यस संस्थाबाट अन्य गैर सरकारी संस्थाले पनि सिक्नुपर्नेमा उनले जोड दिए ।
कार्यक्रममा विभिन्न संघ संस्थाका प्रमुख एवम् प्रतिनिधिहरुको समेत उपस्थिति रहेको थियो । कार्यक्रम संस्थाका निवर्तमान अध्यक्ष हिरा एसीको अध्यक्षता, उपाध्यक्ष श्रीसको स्वागत मन्तव्य तथा सचिव नेपालको संचालनमा सम्पन्न भएको थियो ।